अर्को माओवादी जन्माउने प्रचण्डको धम्कीले कति डराउलान ओली ? | My Sanchar
काठमाडौं –शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई केही बुँदाहरुमा चेतावनी मूलक असन्तुष्टि पोखे । पार्टी एकीकरणको घोषणा पछि अझै समेत पूर्ण रुपमा पार्टी एकता हुन नसकेको यो पार्टी भित्र अझै पनि एकता गर्न बनेको कार्यदलले समय थप गर्न माग गरिरहेको छ । यसको अर्थ यहाँ मूलभूत अन्तर्वस्तुमा नै यो पार्टी भित्र समझदारी हुन सकेको छैन ।
दुई तिहाईको बलियो राजसिंहासनमा बसेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दलसम्म त केही पनि डर थिएन । तर, अहिले सत्तारुढ र आफ्नै दलबाट समेत अनेकानेक असन्तुष्टिहरु आउन थालेपछि भने ओली माथि समेत दबाब सुरु भएको स्वतन्त्र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर, सत्तारुढ दलले नै यस्तो धम्की दिँदै गर्दा र भेनेजुयलाको विषयमा सरकारलाई अफ्टेरोमा पार्ने प्रयास गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले कसरी व्यवस्थापन गर्लान् ? फरक विचार र फरक सिद्धान्तको आधारमा एकीकरण भएको यी दलहरुबीच यत्ति छिट्टै दरार सिर्जना हुनुले राम्रो संकेत भने दिँदैन । यसलाई ओलीले सकारात्मक अवतरण गर्ने आशा आम नेकपा कार्यकर्ताको देखिन्छ ।
Previous : डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले बजेट दुरुपयोग गरेको भन्दै सृजनात्मक समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए
Next : नेपालमा हवाई सञ्जाल विस्तार गर्न भारतीय पर्यटन व्यवसायीकाे सुझाव